Dowladii Ugu Horreysay oo Afrikaan ah oo Soo Saartay Tallaalka COVID-19 | Warbaahinta Ayaamaha
Dowladii Ugu Horreysay oo Afrikaan ah oo Soo Saartay Tallaalka COVID-19
CAPE TOWN-AYAAMAHA-Madaxweynaha Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa, ayaa furey warshad cusub, oo soo sareysa wax soo saar tayo leh, taasoo noqon doonta tii ugu horeysay ee Afrika ku taalla, ee soo saarta tallaalka cudurka safmarka Covid19 oo buuxa.
Xarunta warshadda Nant-SA ee ku taalla magaalada Cape Town ee dalkani, ayaa waxaa aasaasey maal qabeenka, isla markaana cilmiga biology-ga ku takhasusey ee u dhashey dalka Koonfur Afrika, fadhigiisuna yahay dalka Mareykanka, Dr Patrick soon-Shiong.
Warshadda ayaa lagu wadaa iney soo saarto tallaalkeeda ugu horreeya sanad gudihiis, iyadoo hadafku yahay marka la gaaro 2025-ka, in sanadkiiba lasoo saaro hal bilyan oo xabo oo tallaal ah.
Koonfur Afrika, ayaa leh laba xarumood oo kale, kuwaasoo soo saara tallaalada qeybaha dhexe ah. Xafladdii furitaanka, ayaa Madaxweyne Ramaphosa waxa uu sheegay in tallaabadani ay muujineyso in qaaradda Afrika ay u jiheysatey dhanka isku filnaanshaha.
“Afrika waa inaaney galin mar danbe safka u danbeeya ee helitaanka tallaalka inta lagu guda jiro cudurada aafooyinka ah, ma ahan inaan gacan hoorsanno, si aan u helno tallaal”, ayuu yiri Madaxweyne Ramaphosa.